Esi sigqubuthelo ke isono Islam | Apg29
Ikhuselo nezambatho ndiyangqina ukuba Muslims.
Intombazana enxibe isigqubuthelo.
Xa amabhinqa aselula Swedish baba amaSilamsi, bathatha ke ngokukhawuleza ephezu yamaSilamsi. Abazange ukwenza oku phambi kokuba yayingamaMuslim. Le isikhafu okanye isigqubuthelo ngoko kuye ukuvuma ukuba ngoku ke amaSilamsi abe Islam.
Indawo street yesiqhelo
Ndihleli neekhilomitha ezisibhozo ukusuka Forserum. In Forserum ubomi amaSilamsi amaninzi. Xa kufika Forserum ndibona ngqo ukusuka emotweni yam abafazi Muslim bahamba ezitalatweni. It is a scene yesitalato eqhelekileyo.
njani Ndazi ukuba kukho abafazi Muslim? Ndiyabona phezu iingubo zabo. Baye nezikhafu ezintlokweni zabo kunye nempahla olubanzi. iingubo zabo kungqina ngoko ukuba Muslims.
Ndibona abantu abangenayo ezi izambatho, ndiyacinga kungekhona ngenxa yokuba Muslims. Ngamanye amazwi, iimpahla ukuvuma ukuba Muslims. Ibonisa ihlabathi ukuba Muslims.
Vala iinwele zawo kwaye azo
Ithi ku Qur'an ukuba abasetyhini Muslim kufuneka kukugubungela iinwele zawo kwaye esifubeni babo qhiya okanye isigqubuthelo. Kuba ngale ndlela ukubonisa ukuba amaSilamsi ukuze amadoda aya kuba le website Muslim islam.se kubakhathaza. Ngaloo adlwengulwe. Baya kubonisa ukuba hayi amakhoboka okanye abangakholwayo ukuba isimahla ukuba amadoda ukuba ahlukumeze nodlwengulo.
Quran: uthi abafazi bekholelwa ukuba kuthoba amehlo akhe kulinda amalungu zabo zabucala kwaye ukubonisa ngaphezulu ukuzilungisa lwabo ngaphezu beneentloni zingabonakala; Mabathi ngoko bazobe izigqubuthelo zabo (Khimar) ukuze kwesifuba ...
Yiyo le vesi, inani 31 yesahluko i Quran i-24, nto leyo isisiseko ukunxitywa isigqubuthelo. Xa Muslims nixoxa ngale ndinyana ikhankanya isibizo Khimar eliguqulelwe ngokuthi "isigqubuthelo". Mohammed UKnut Bernström ubhale oku Umbhalo le vesi nokutyhilwa kwalo le Quran:
Isibizo Khimar (plur. Khumur) Libonisa isigqubuthelo abafazi Arab phambi nasemva nokufika Islam kwimbali waba nomkhuba lokunithumelela iinwele. Ngokutsho ezininzi abahlalutyi odidi wayenxiba isigqubuthelo ngaphezulu okanye zokuhomba ngaphantsi, lathamba ejingayo phantsi ngasemva nangenxa eneengubo yabafazi phantsi Ulobumba ngakunye ezikhoyo ke kwakukho ubomi décolletage ngaphambili, waye umhlola inxalenye bar. Abafazi becelwa apha kutheni ukuze ayifihle kunye ngoncedo Khimar.
nesigqubuthelo entloko yakho
Enye abahlalutyi yamandulo njengoko Bernström kwakubekwe yi Ibn Kathir (d. 1373) echaza igama Khimar imele into ogubungele kwaye esetyenziswa ukuba nesigqubuthelo entloko. Ukwayamanisa ikhuselo kuthetha ukuba ukutsala ngeenxa kwaye kukhuselekile. Oku kuya kwenziwa phezu entanyeni kunye esifubeni kangangokuba akukho nto babonwe ngabo. Ibn Kathir kwakhona uphawula umprofeti yomfazi Islam Muhammad kaThixo 'A'ishah:
Ngamana ubabalo lukaThixo phezu oomama naziphi yokuqala. Ke uThixo wazityhila le ndinyana: 'Bayekeni ke ngoko izigqubuthelo zabo yokugubungela esifubeni' bazikrazula bodices abo babeka phezu kwabo.
Injongo komkhusane kunye iimpahla Muslim kukuba akukho kutsala ingqalelo. Kodwa ke mna ndithi ukuba eyahlukileyo. zithathwa Amehlo am ngqo iimpahla ezahlukeneyo, naloo malaphu kwamabhinqa Muslim banxibe. Bema ngaphandle esihlweleni.
Banciphise iya kuthathwa ezichanekileyo inani iimeko ekufuneka kuhlangatyezwane nayo. Ezi ziquka:
Loo nto iya kukugubungela umzimba lonke, njengoko kuchaziwe apha ngasentla.
Kufuneka sibe busisihombo ngokwalo. Le entofontofo Ngamanye amazwi, musa ukutsalela ingqalelo engafunwayo ukuba ngokwayo, apho ke yenye neengcambu le vesi 24:31.
Le iingubo akufuneki babe ngaphaya.
Kufuneka ibe loose kwaye siyaphepha enye ukuze bona bawubonakalalisayo iifom emzimbeni okanye nempepho.
impahla le ndoda
Le Iqabane Abu Umamah wandixelela ukuba weva uMprofeti Muhammad - uxolo malube phezu kwakhe - bathi:
Ukuqinisekisa izinto ezintandathu kwaye ndiya ziqinisekise wena kwiParadesi: xa omnye uthetha, akayi kuthetha amanga; endaphathiswa into uya kundingcatsha, lowo ithemba; Ukuba wenza isithembiso akayi makayiqhawule; ehlisa amehlo akho; ukuzibamba izandla zakho uze ukhusele amalungu akho abucala [umzimba].
Kanye njengokuba imithetho njani isinxibo basetyhini kufuneka babe ukuze alungise, kukho kwakhona ulungiselelo impahla yomntu. Ezi ziquka ukuba avunyelwe (halal), nto leyo ethetha ukuba Umzekelo ukuba kufuneka zenziwe isilika okanye ziba igolide xa ezi zinto zimbini zigcinelwe abafazi. Kufuneka kwakhona babe ebhityileyo okanye ngaphaya ukuze zibonisa enye amalungu omzimba mannan ayi hambelani noguqulelo (awrā '). Kufuneka sixelise iingubo disbelievers kwaye kucetyiswa (mustahabb) ukuba banxibe iimpahla ezimhlophe. Ukongeza, kukho kwakhona esalelweyo ukunxiba iimpahla ukuba ume ngaphandle ngendlela eyenza ukuba kunikelwe ingqalelo kuzo kunye yenethiwekhi ophum idume ngayo.
abantwana Small enxibe izigqubuthelo
Bathi xa abantwana beze elivisayo, ukuba ukunxiba ezi izigqubuthelo, kodwa ndibona abantwana abaselula banxibe izigqubuthelo. Ngale ndlela, abantwana baye sexualized kwaye abathi engaqondanga ukuya Inkolo yamaMuslim.
Mona Sahlin noLena Hjelm-Wallens izikhafu
Ngo September 11, 2001 wabona abagrogrisi ezoyikekayo eUnited States owabulala ukuya ku 3,000 baseMerika waza wadala imfazwe ezoyikekayo ngakumbi. Nini amalungu kaRhulumente Mona Sahlin noLena Hjelm-Wallen ibe lokukhonzela Swedish kunye nezikhafu phezu kweentloko zabo. Oku akonwabanga izifundo ezininzi yaye kubonakala ngathi isenzo bengasiqondi.
Kodwa, inyaniso kukuba kukho ubungqina, okanye ubuncinane uthsuphe wokuba ukuba Mona Sahlin ngokwenyani a Muslim. Le bungqina ivela umfazi Muslim Nalin Pekgul zijongene unyulo jikelele:
"Umntu Mona Sahlin, umzekelo, ukuba ziya nokutsha komphathi Tensta kuba ucinga nguye usisiqinisekiso amalungelo abanye abantu ukuba abe kweli lizwe kunokuba mhlawumbi abanye amaSilamsi amaninzi abangasoze phawula."
ngesibindi yam. kunye:
"Ndiyavuya kakhulu ukuba (Sahlin) ihamba uluhlu kuba ndiyakholwa kuye, andikwazi athengise nasiphi na isixa e Tensta, kodwa mhlawumbi Bendingayi athengise nayiphi na amaSilamsi ngendlela efanayo"
State Ukutyelela Iran ngo-2017
Ngokuphathelele ne tyelelo zikarhulumente Iran ngoFebruwari 2017 bayithwala imazi ngabalungiseleli komkhusane. Oku Kakade ke esingaqhelekanga unikwe ukuba abathathi-nxaxheba ababhinqileyo kwi ehambele kwamanye amazwe 'ukuba waziva enyanzelekile ukuba benze okufanayo.
FUNDA UMFANEKISO: abaPhathiswa zokwaleka ezikrelekrele.
Ngoko ke into ekhethekileyo abathunywa Swedish. Le nto ngaphezu njengembonakaliso uvelwano okanye ukunconywa? Ngaba bebulela Inkolo yamaMuslim?
Ann Linde ikhuselo kuveza umgaqo-nkqubo wakhe
I yangoku wezangaphandle Ann Linde of Commerce of enxibe yesigqubuthelo Iran kutyelela 2017.
Abaninzi zavuya Ngokuqinisekileyo iindaba ukuba uMargot Wallström wayeza asule, kodwa uvuyo waba mfutshane ngokwaneleyo enikwe ukuba Commerce Ann Linde eftertädde naye.
Yena waye ukutyelela Iran ngoFebruwari 2017 kwaye zigqutyuthelwe (https://media.publika.md/en/image/201702/full/_94625808_annlindeirna_41696400.jpg) ngokwabo kunye nezinye abalungiseleli ababhinqileyo. Nicinga ukuba wasisusa isigqubuthelo ngoko oku kunika uthsuphe wokuba ukuba akukho cala kweli ungquzulwano phakathi kwamaSirayeli kunye neGunya Palestine.
She is ngokuqinisekileyo nxamnye kuMbindi Mpuma ekuphela idemokhrasi, uSirayeli uya emanyathelweni eyandulela wakhe uMargot Wallström kaThixo.
2011 wamisa Palestine Association Ann Linde "unyaka Palestine" kunye noku kulandelayo:
Ann Linde, ngomsebenzi wabo kunye nokuzinikela, ngohambo lwakhe ePalestina noSirayeli, nabo abo kunye neengxoxo kunye omabini amaqela, wagxininisa imeko namaPalestina 'kunye lucidity, ecacileyo kunye nesibindi, wayi njengoko ingqalelo ka East iJerusalem likomkhulu Palestine elizayo karhulumente kunye nokuqaphela Palestine njenge inani lilungu 194 le-UN. umzabalazo Ann Linde ukuze uxolo nobulungisa sele ebezisoloko ujoliso kumthetho wamazwe ngamazwe kunye nemigaqo namalungelo oluntu.
Ikhuselo utyhila ukuba yintoni nkqubo kuMbindi Mpuma, yena ihambe commerce. Ngoko apha wathi kwikhondo idemokhrasi e Tel Aviv ngo-2008:
"Le ingxabano phakathi kwaSirayeli nasePalestina, apho kuyimfuneko ibaluleke kakhulu uxolo kukuba umsebenzi Israeli iphela, oku isitshixo lonke kuMbindi Mpuma zingaphuhliswa kwicala ngoxolo."
Phawula ukuba uthetha 'Palestine "njengelizwe sele ngo-2008, kwiminyaka emibini ngaphambi kokuba urhulumente wedemokhrasi zentlalo waqonda ukuba njengelizwe, nangona akukho lizwe.
Ikhuselo akakwazi ukusindisa wena
E Tehran, Iran waba umfazi 2018 wagwetywa iminyaka emibini entolongweni, ukuze ulwaphulo-Muslim ukuba isuswe esidlangalaleni isigqubuthelo yakhe . Kwiinyanga ezimbini wabanjwa abafazi 30 ngezizathu ukuba balile anxibe isigqubuthelo.
Umthetho phezu ukunxitywa isigqubuthelo ukuba bobabini ababafazi yamaMuslim non-Muslim e-Iran ibe ukusebenza ukususela wegazi Islamic revolution 1979th
Makhe bathi oku ngokucacileyo: isigqubuthelo akakwazi ukusindisa wena. Endaweni yoko, le yindlela becinezela yaye ukubenza kuwe, wena Muslim okanye hayi.
Kuphela ukuba ugcine ngokwenene wafaka wena ngokupheleleyo ezamahala zingezizo ezikaYesu Kristu.
UThixo uthanda bonke abantu, kodwa akukho isigqubuthelo noba ukusindisa okanye ukumkholisa uThixo. Ukuba usindiswe kwaye ngokwenene nceda uThixo, ngoko ufanele ukwamkela uNyana wakhe uYesu Kristu wathuma ehlabathini ukuba afe emnqamlezweni uyihlangulayo.
UYesu uyaphila namhlanje - uvukile kwabafileyo. Xa ufumana Yena uya kusindiswa kwaye simahla. ngokwenene uYesu Kristu ikhulula abantu.
IBhayibhile ibhekisela komkhusane okanye qhiya, kodwa kulo mxholo kucacile ukuba akukho mthetho ngaphandle siko. UYesu uye wenza abantu ezamahala, kungekhona ngenxa yokuba uza kwakhona ukuba ibekwe ekuthinjweni, kodwa ukuba bahlale mahala.
Mona Sahlin iguqulelwe ku Islam?